Tayada biyaha waraabka
Tayada biyaha iyo astaamaheeda waxay saameyn ku yeeshaan koritaanka dhirta, qaab dhismeedka carrada iyo waliba nidaamka waraabka laftiisa. Tayada biyaha waraabka badanaa waxay kuxirantahay iskudhiskeeda jirka iyo kiimikada, ama faahfaahin intaa kabadan macdanta biyaha iyo joogitaanka o ...
Waxaan ku soo bandhignay sidii carwooyin 123rd Spring Canton Fair. Goobta lagu soo bandhigayay, waxaan ku helnay in ka badan 30 shirkadood iyo macaamiil ka kala yimid Bariga Dhexe, Hindiya, Masar, Yurub iyo Shiinaha. Gorgortanka, alaabada shirkaddu waxay ku guuleysteen macaamiisha qiimo aad u wanaagsan iyo qiimo sare ...
Warshaddeena cusub waxaa loo raray May 2015, oo daboolaysa 20,000 ㎡ dhul. Dhismayaasha waxaa ka mid ah wax soo saar, bakhaar, iyo aag xafiis, iyo qolal jiif ah. Ku qalabaysan mashiinno horumarsan iyo maarayn tayo leh, Greenplains wuxuu ku kalsoon yahay inuu la kulmo caqabadaha sare, uuna abuuro mustaqbal wanaagsan.